Cameron.....: Angels Cry.....
မမရဲ့ အိန်ဂျယ် မျက်စိလည်လမ်းမှားတာမဟုတ်ဘဲ မမဘလော့လေးကို တကူးတကလာလည်ပါစေမမ။
တမင်လာလည်ရင်း နားထောင်သွားတယ်မမ ညီမလေးလည်း သူ့ကို သဘောကျတယ် ..:)
တိပါဘူး....အိန်ဂျယ်တစ်ယောက် ငိုနေပီလားလို့..... :)
မျှော်လင့်တောင့်တမှုလေးတွေကြောင့် မဖိတ်ခေါ်ပဲ အိန်ဂျယ်ရောက်လာမှာပါ မိုးငွေ့ရေး)
Mariah Carey ကို သူ့အသံစူးရှရှလေးကို ကြိုက်တယ်
အိန်ဂျယ်(White Angel) လာဖတ်သွားတယ်နော်....း)
M.Carey က.. ခုထိ ကမ္ဘာမှာ ဈေးအကြီးဆုံး အဆိုတော်ပဲအစ်မရဲ့.. ဆွဲတဲ့အသံတွေအရမ်းမိုက်တာ.
Westlife နဲ့ပြန်ဆိုထားသေးတဲ့ Aganst all odds.. ဆို အရမ်းကြိုက်တာ.
Mariah ရဲ့အသံက မှန်တွေတောင်အက်ကွဲစေတဲ့ အစွမ်းရှိတယ်ဆိုပဲ အစ်မရေ..။ ဒီသီချင်းကိုလဲကြိုက်တယ်။ အိန်ဂျယ်ကြိုက်မကြိုက်တော့ သိဘူးး))
နိုင်ငံခြားသီချင်းတွေတော်တော်နားထောင်ထားတာပဲ။အခုပို့စ်ကိုဖတ်ရင်းနိုင်ငံခြားသီချင်းတွေအကြောင်းရေးတာလို့ကောက်ချက်ချမလို့ရှိသေးတယ်နောက်ဆုံးကျတော့အိန်ဂျယ်ကပါလာပြန်ရော။အိန်ဂျယ်နဲ့လွတ်တဲ့ပို့စ်မရှိလောက်ဘူးထင်တယ်နော်။ :)။ မှတ်ချက်တွေထဲမှာ အဖြူရောင်နတ်သမီးရေးသွားတာကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ။သဘောကျမိတယ်။